eHimalayatimes | खेलकुद | पहिलो सेमिफाईनल फ्रान्स र बेल्जियम – कस्ले मार्ला बाजी ?
19th February | 2019 | Tuesday | 2:06:45 PM
पहिलो सेमिफाईनल फ्रान्स र बेल्जियम – कस्ले मार्ला बाजी ?
POSTED ON : Tuesday, 10 July, 2018 (11:02:47 AM)
एजेन्सी । रसियामा जारी विश्वकप २०१८ फुटबलमा आजबाट पहिलो सेमिफाईनलको खेल सुरु हुदैछ । आज युरोपका दुई टिम फ्रान्स र बेल्जियम प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका छन् । प्रतियोगितामा अहिलेसम्म दुवै टोली अपराजित छन् ।
खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने १२ बजे सुरु हुनेछ ।
दुवै टोली समुह विजेताका रुपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका थिए । दुवै टोली आज पनि जित निकाल्दै फाईनल प्रवेशको लक्ष्यका साथ खेल्दैछन् ।
फ्रान्स समुह सी र बेल्जियम समुह जीको विजेताको रुपमा अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेका हुन् ।
नकआउट चरणमा फ्रान्सले अर्जे्न्टिना र बेल्जियमले जापानलाई पराजित गरेको थियो । क्वार्टरफाईनलमा फ्रान्सले उरुग्वे र बेल्जियमले ब्राजिललाई हराउदै अन्तिम ४ को यात्रा तय गरेका थिए ।
आजको खेलमा फ्रान्सबाट एन्टोनी ग्रिजम्यान, केलियन एम्बाप्पे, पाउल पोग्बा जस्ता युवा खेलाडी खेल्दै छन् भने बेल्जियममा इडेन हजार्ड, रोमेलु लुकाकु र केभिन डि ब्रोयनले खेल्नेछन् ।
यसअघि, फ्रान्सले तीन ठुलो प्रतियोगितामा बेल्जियमलाई हराएको छ । जसमा दुई पटक विश्वकप खेलमा रहेको छ । फ्रान्सले १९३८ मा विश्वकपको पहिलो चरणमा बेल्जियमलाई ३–१ ले हराएको थियो । आज पनि फ्रान्स त्यो इतिहास दोहोर्याउने दाउमा छ भने बेल्जियम जित निकाल्दै फाइनल प्रवेशको लक्ष्यमा छ ।
सन् १९८४ को युरोकपको समुह चरणमा फ्रान्सले बेल्जियमलाई ५–० ले हराएको थियो । तर यस पटक बेल्जियम फरक लयमा भएका कारण खेल यस्कै पक्षमा हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ । बेल्जियमका हजार्ड र लुकाकु फर्ममा रहेकाले उनीहरुले मौका पाउनासाथ कलात्मक आक्रमण गर्न सक्ने खेल पण्डितहरु बताउँछन् । जसका कारण बेल्जियम बलियो टिमका रुपमा पहिचान बनाएको टिम हो भनिन्छ ।